Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' का प्रतिनिधिहरूसँग केही चरणमा भएको भेटपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल .....!
भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' का प्रतिनिधिहरूसँग केही चरणमा भएको भेटपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल .....!
भट्टराई नेतृत्वको सरकारको आयु मात्र १५ दिन रहेको दाबी
भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' का प्रतिनिधिहरूसँग केही चरणमा भएको भेटपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी समूह मोहन वैद्यको पक्षसँग लड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। नयाँ परिस्थितिमा वैद्यहरूले उठाउँदै आएको मुद्दामा सहमति गर्नै नसकिने र त्यसो गर्दा पार्टी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा एक्लिने भएकाले अव वैद्यहरूसँगै लड्ने मनस्थिति दाहालले बनाएका हुन्। वैद्यलाई मिलाएर पार्टी एक जुट बनाउँदा आफूसँग लड्नका लागि सामुन्नेमा मुलुकका अन्य राजनीतिक दल, भारत र अन्य मुलुक आउने भएको र उनीहरू सबैसँग लड्नुको साटो वैद्यसँग लड्नु सजिलो हुने दाहालको निश्कर्ष छ। त्यसका लागि वैद्यले पार्टी फुटाए पनि माओवादीमा २० प्रतिशत मात्र क्षति हुने र आफ्नो नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टु.ग्याएर वैद्यहरू अलग्गिदा भएको क्षति पुर्ताल हुने दाहाल पक्षको ठम्याइ छ। उता वैद्य पक्षले पनि अव प्राविधिक रुपमा मात्र पार्टी फुट्न बाँकी रहेको र राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा दुई पार्टी भइसकेको निश्कर्षमा पुगेको छ। बुधवार उपत्यकामा उपलब्ध आफू पक्षीय केन्द्रीय नेताहरूको भेलामा महासचिव रामबहादुर थापाले अव अध्यक्ष दाहाल पक्ष राजनीतिक आत्मसमर्पणको निर्णय सच्याएर आए मात्र एउटै पार्टी रहन सक्ने नत्र पार्टी प्राविधिक रुपमा मात्र फुट्न
बाँकी भएको बताएका थिए।
वैद्य पक्षले पार्टीका हरेक तहका कमिटीहरूमा समानान्तर संरचना खडा गरिसकेको छ भने अव जनवर्गीय संगठनमा पनि समानान्तर संरचना खडा गर्ने योजना बनाएको छ। तत्कालका लागि त्यस्तो समानान्तर संरचनाले शान्ति प्रक्रियाका नाममा सरकारले गरेका माओवादीलाई आत्मसमर्पण गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेछ भने त्यसपछि त्यसैलाई पार्टीका संगठनमा रुपान्तरण गर्नेछ।
शान्ति प्रक्रियाका विषयमा बाबुराम भट्टरार्ई नेतृत्वको सरकारले लडाकुको संख्या र मापदण्ड तय नभइ पुनर्वर्गीरण गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, मधेसी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सम्झौतालाई अस्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न नदिने र युद्धकालमा कब्जा जमीन फिर्ता गराउन खोजे प्रतिरोध गर्ने तयारी बेद्य पक्षले गरेको छ। त्यसैका लागि उसले पार्टीका हरेक तहमा आफ्ना संरचना खडा गरेको छ। जसले दशैं लगत्तै चार बुँदे सम्झौता विरुद्ध देशब्यापी सडक प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ। चार बुँदे सम्झौता र त्यसैलाई आधार बनाएर रक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले दिएको अभिब्यक्तिले नेपालवाट तराईलाई अलग गराएर भारतमा गाभ्ने योजना बनाएरको र पार्टी अध्यक्ष दाहाल त्यसमा सामेल भएको निश्कर्ष वैद्य पक्षले गरेको छ। चार बुँदे र साँचो हस्तान्तरण प्रकरणवाट उत्पन्न विवाद कार्यनीतिक नभएर रणनीतिक विवाद भएकाले यो विषयमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने र पार्टीमा फुटको घोषणा नगरी विस्तारवादी र सामन्तवादी एजेन्टलाई पार्टीवाट निकालेको घोषणा गर्ने तयारी वैद्य पक्षको छ।
दाहाल पक्षले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक सार्दै लगेर शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेस एमालेसँग समेत केही समझदारी गरेपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने त्यस बेला आवश्यक परे बहुमतवाटै शान्ति प्रक्रियामा सरकारले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। दशैं अगाडी नै यो काम गर्न नसकेकाले माओवादीको बैठक पनि सारिएको थियो। शुक्रबारको बैठकका लासिग राजनीतिक दस्तावेज तयार गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल यसै साता सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे गएका थिए। तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियामा केही निर्णय नलिइ दस्तावेज तयार गर्नु अनुपयुक्त ठानेपछि उनी त्यसै फर्केका थिए र केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेका थिए।
दुवै पक्ष तिहारपछि हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकवाट 'फाइट टु फिनिस' गर्ने तयारीमा छन्। यसपटक वैद्यसँग सम्बन्ध अलग गरेर भए पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राम्रो सम्बन्ध बनाउने र पार्टीलाई शान्तिपूर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्ने पक्षमा दाहाल उभिएका छन्। यसलाई वैद्य पक्षले अध्यक्ष दाहालले मुलुकलाई सिक्कीमीकरणको नयाँ संस्करणमा भारतलाई बुझाउने तयारी गरेको वताएको छ।
माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य हरिवोल गजुरेलले माओवादीभित्र धेरै प्रदुर्षण भएकोले रविन्द्र र मातृका जस्ता ब्यक्तिहरु चोईटिएर गए पार्टीलाई फाईदा हुने बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता गजुरेलले पार्टीभित्रको अहिलेको विवादमा केही नेताहरु चोईटिएर जाने सम्भावना पनि औल्याए। उनले भने–पार्टीभित्र धेरै प्रर्दुषण छ , मातृका र रविन्द्र जस्ताहरु अहिले पनि चोईटिएर जान सक्छन, उनीहरु जानु पनि पर्छ यसले पार्टीलाई फाईदा नै गर्छ। यद्यपि उनले एकीकृत नेकपा माओवादी भने कुनै पनि हालतमा नफुट्ने दावी गरे।
उनले अहिले जारी संघर्षको वीचबाट पार्टी झनै एकीकृत हुने नफुटने ठोकुवा गरे।
उनले पार्टीभित्रबाटै विरोध भएको चार बुँदे सहमतिले मधेसी जनताको भावनालाई संबोधन गरेकोले त्यसको विरोध गर्नेहरु राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए। गजुरेलले मधेसी जनतालाई सेनामा प्रवेश गराएर समावेसी बनाउने कुराको देशभक्तहरुले विरोध नगर्ने समेत ठोकुवा गरे।
उनले बाहिर विरोध भएको जस्तो सुपुर्दर्गि सन्धी, एयर मार्सल राख्ने जस्ता विषयहरु सम्झौतामा नभएको भन्दै सरकार निर्माणको आधार चार बुँदेसहमति खारेज भए बर्तमान सरकारनै ढल्ने बताए। उनले अहिलेको सरकारको विकल्प सहमतिको सरकार मात्रै भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्थामा मात्र चार बुँदे सम्झौता खारेज हुने स्पष्ट पारे।
उनले पार्टीभित्र चार बुँदे सम्झौताको विषयमा छलफल भएको र त्यसमा तत्कालिन समयमा कसैको पनि विमति नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य खेमा वीच भएको धोविघाट सम्झौता खारेज भएपछि बैद्य समूहले विरोध गरेको दावी गरे। उनले भने–धोवी सम्झौताकेा उद्देश्य पुरा नभएपछि चार बुँदेलाई राष्ट्रघाट भनिएको हो। पहिला यसमा सबैकेा समर्थन थियो।
शान्ति र संविधान निर्माणमा माओवादी प्रतिबद्ध भएको भन्दै काग्रेसको असहमतिले शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य रोकिएको दावी उनको थियो। उनलेभने–शान्ति र संविधानमा माओवादी प्रतिबद्ध छ। माओवादीभित्रको अर्न्तद्धन्द्धले शान्ति र संविधानमा कुनै असर पारेको छैन।
उनले अध्यक्ष प्रचण्ड र काग्रेस सभापति सुशिल कोइरालावीच सकारात्मक रुपमा कुराकानी भईसकेकोले दशैभित्रमै महत्वपूर्ण सहमति बनेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास ब्यक्त गरे।
उनले संविधानसभाको म्याद आगामि मंसिर १४ गते पछि पुन थप्ने विषयमा दलहरुवीच खासै विवाद नभएकोले म्याद फेरि थपिने विश्वास ब्यक्त गरे। गजुरेलले रक्षामन्त्री र उनको दलले विवादास्पद अभिब्यक्तिको विषयमा गल्ती स्विकार गरेर आत्मालोचना गरिसकेकोले अब त्यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै सोही विषयालाई लिएर राजिनामाको कुरा उपयूक्त नहुने तर्क गरे।
फरक प्रसंगमा उनले अमेरिकाले माओवादीलाई जति लामो समय सम्म आतकंकारीको सूचिमा राख्छ त्यतीनै उसलाई घाटा हुँदै जाने र अप्ठ्यारो पर्दै सजाने भन्दै अरु देशले माओवादीलाई समर्थन गरिसकेकोले कालान्तरमा यो विषय अमेरिकाकोलागी लाजमर्दो विषय बन्ने दावी गरे। उनले भने–सबैले माओवादीलाई समर्थन गरिसके अब पनि अमेरिकाले आतंकारीकै सूचिमा राख्ने हो भने सबै उप्रति हास्छन।
उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई पार्टीबाट निकाल्न अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ जुक्ति निकालेका छन्। गत आइतबार साँझ सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा अप्रत्यासित रूपमा ताम्सालिङ राज्य इन्चार्ज अग्नि सापकोटाका साथ पुगेका प्रचण्डले निकटस्थहरूलाई भने, 'वैद्यलाई कारबाही होइन आफैं निस्केर जान बाध्य पारिनुपर्छ।' आरामका लागि भन्दै सुकुटे इक्वेडर रिसोर्टमा पुग्नुभएका प्रचण्डले सोही साँझ ताम्सालिङ राज्यसमितिका आफूनिकटस्थहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। करिब तीन घन्टा लामो प्रशिक्षणमा प्रचण्डले उपाध्यक्ष वैद्य तथा वैद्य पक्षधर नेताहरूको विरोधमा समय खर्चिनुभएको थियो। प्रशिक्षणमा सहभागी सिन्धुपाल्चोकका एक नेताका अनुसार ठट्यौली शैलीमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'यो वैद्ययुग होइन, विज्ञानको युग हो, त्यसैले हामी पनि वैज्ञानिक ढङ्गबाट चल्नुपर्छ, साथीहरूले त्यसैअनुसार बुझ्नुहोला।'
रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा सत्तारुढ माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले शुक्रबार साँझ राजधानीसहित केही जिल्लामा मसाल जुलुस निकालेको छ ।
वैद्य समूहका जनवर्गीय संगठनले राजधानीको रत्नपार्क, लगनखेल र भक्तपुरमा साँझ मसाल जुलुस निकालेको हो । पोलिट्ब्युरो सदस्य नारायण शर्माले रक्षामन्त्रीको 'राष्ट्रघाती' अभिव्यक्ति र चार बुँदे सम्झौता खारेज नभएसम्म मसाल जुलुसहितका विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने बताए ।
यसअघिको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक नबसेम्म अन्तरसंघर्षलाई सार्वजनिकरुपमा प्रस्तुत नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वैद्य समूहले रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध दुई दिनदेखि राजधानीसहित देशभर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजधानी बाहिर भएका कतिपय जिल्लाका विरोधमा एमाले, कांग्रेसलगायतका दलले पनि वैद्य समूहलाई सघाएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा मधेसीलाई विभेद गरिरहने हो भने मधेसका २२ जिल्लाले निर्णय गरेर नेपालबाट अलग हुने चेतावनी दिएका थिए । 'मधेसका २२ जिल्लाले अलग हुने निर्णय गरे कुन ऐन र कानूनले मुलुकलाई बचाउँछ ?,' उनले भनेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बिषयमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले झुट बोल्न थालेको आरोप लगाएका छन् । शान्ति र संविधानका लागि इमान्दार प्रयत्नको खाँचो रहेको भन्दै खनालले प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछाडी हट्न खोजेको उल्लेख गरे ।
एमाले नेतृ साहना प्रधानको निवासमा 'आज समकालिन इतिहासमा पुष्पलाल' पुस्तकको विमोचन गर्दै खनालले प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको दाबी गरे । दलहरु शान्ति र संविधानमा एकमत नभएसम्म राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्ने खनालको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले प्रतिपक्षी दलको मन जित्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । खनालले मधेसका २२ जिल्ला छुट्टनि सक्ने रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए । राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई सरकारमा बस्ने अधिकार नभएको उनको भनाई थियो । रक्षामन्त्रीको भनाईप्रति उनकै पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरमले समेत त्रुटी स्वीकारी सेको छ ।
गोविन्द ज्ञवालीद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको योगदान समेटिएको छ । पुष्पलालका हितैषी ज्ञवालीद्धारा लिखित १ सय ४९ पृष्ठको पुस्तकमा नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसमा पुष्पलालको प्रवेश, दिल्ली सम्झौता, संयुक्त जनआन्दोलन लगायत २० वटा बिषय समेटिएका छन् ।
पुस्तक विमोचन गर्दै अध्यक्ष खनालले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदानबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउनु लेखकको ऐतिहासिक दायित्व भएको उल्लेख गरे । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू पुष्पलालको विचारबाट प्रेरित भएर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको चर्चा गर्दै नेपालमा पुष्पलालले सोचे जस्तै समाजवाद छिट्टै स्थापना हुने धारणा राखे ।
मन्त्रीबाटै शान्ति सुरक्षामा खतराः खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकारका मन्त्रीहरुबाटै शान्ति सुरक्षामा खतरा रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमाले ललितपुरले दसैं तिहारको अवसरमा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष खनालले नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्रिय अखण्डतामा नै खतरा देखिएको दाबी गरे ।
'नेपाली जनतामा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण अगाडि बढ्न नसकेकोमा भन्दा शान्ति सुरक्षामा नै खतरा रहेको त्रास छ,' उनले भने, 'पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय अखण्डतामा नै खतरा देखिएको छ ।'
अध्यक्ष खनालले सरकारका मन्त्रीहरु नै हत्या हिंसाको सहारा लिएको भन्दै सरकार बनेको एक महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति नभएको ठोकुवा गरे । उनले भने, 'माओवादीले जसरी आशा जगाएर सरकारमा गएको थियो, एक महिनामै जनतामा निराशा देखिएको छ ।'
नेकपा एमालेका नेता एव्म पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको आयु मात्र १५ दिन रहेको दाबी गगरेका छन् । प्रधानमन्त्री आफ्ले भनेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारको यस्तै चालले शान्ति प्रकि्रया पुरा हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले काम नगर्ने तर संविधान सभाको म्याद थप्ने कुरालाई जायज मान्न नसकिने बताए ।
माओवादी र मधेशवादीदलहरु राष्ट्रियता विरोधी अभियानमा लागेको भन्दै त्यसको निरन्तरता रक्षा मन्त्री भण्डारीले बोलेको अभिव्यक्ती भएको बताए । उनले अहिले राष्ट्रियताको कुरा गर्नेलाई पन्चको आरोप लगाउने गरिएकोमा विरोध गरे ।